Nandrolone Decanoate (DECA) အမှုန့် (360-70-3) hplc≥98% | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / ဟို steroids / Nandrolone အမှုန့်စီးရီး / Nandrolone Decanoate (DECA) အမှုန့်
SKU: 360-70-3. Categories: Nandrolone အမှုန့်စီးရီး, ဟို steroids
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Nandrolone Decanoate ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (DECA) အမှုန့် (360-70-3) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Nandrolone Decanoate (DECA) အမှုန့်ကိုဗီဒီယို
ကုန်ကြမ်း Nandrolone Decanoate (DECA) အမှုန့်ကိုအခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: Nandrolone Decanoate (DECA) အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 33-37 ℃
စတီရွိုက်သံသရာအတွက်ကုန်ကြမ်း Nandrolone Decanoate (DECA) အမှုန့်သုံးစွဲမှုကို
ကုန်ကြမ်း DECA အမှုန့်အမည်များ
Nandrolone Decanoate အမှုန့် / DECA အမှုန့်ကိုလည်း DECA ကုန်ကြမ်းအမှုန့် durabolin အဖြစ် DUrabol, DECA အမှုန့်ကိုသိနေသည်။
DECA ကုန်ကြမ်းအမှုန့်, ဖြစ်ကောင်း testosterone ဟော်မုန်းပြီးနောက်ဒုတိယအကောင်းဆုံးလူသိများထိုးဆေးဟို Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ Steroid တစ်မျိုးသံသရာနှင့်အတူကြုံတွေ့နေသောနီးပါးတိုင်း Steroid တစ်မျိုးအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောနှင့်များစွာသောအကောင်းဆုံးရလဒ်များအတွက်သူတို့ DECA ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်စေခြင်းငှါယုံကြည်ပုံရသည်။ DECA အမှုန့်နိုင်သောအခြားထိုးဆေး steroids ကြွက်သားကြီးထွားမှုအတွက်အရာအားလုံးလုပ်ပေးနိုင်သည်သို့သော်တကယ်တော့ဒီဒြပ်ပေါင်းများအဘယ်သူမျှမကအထူးဟိုသတ္တိလည်းရှိတယ်။
ကုန်ကြမ်း Nandrolone Decanoate (DECA) အမှုန့်သုံးစွဲမှု
မိန်းမတို့အဘို့, တစ်ပတ်ကို 50-100mg ယောက်ျားအဘို့, တစ်ပတ်ကို 100-200mg အကြံပြုသည်, အကြံပြုသည်။
ထို့ပြင်အားကစားသမားပူးတွဲပြဿနာများရှိသည်ဘယ်မှာများစွာသောသာဓကတစ်ခု Steroid တစ်မျိုးသံသရာအတွက် DECA အမှုန့်အသုံးပြုမှုတချို့အကူအညီများထောက်ပံ့များ၏အပြုသဘောဆောင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိပါတယ်။ 100 မီလီဂရမ် / သီတင်းပတ်အဖြစ်အနိမ့်တောင်မှဆေးများလုံးဝအများအပြားသာဓက၌ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့လောက်နိုင်ပါတယ်။
ယနေ့အထိစျေးကွက်အပေါ်အကောင်းဆုံးရရှိခဲ့ဟို steroids တစ်ခုမှာ; DECA ကုန်ကြမ်းအမှုန့် Durabolin ကိုယ်တိုင်ကအမည်တစ်ခုဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ ကြီးမားသော DECA powdernoate Ester မှချိတ်ဆက်ခြင်း, DECA အမှုန့် Durabolin အဆိုပါ Nandrolone Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်းတက်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာဖို့ရှာဖွေနေအားကစားသမားတို့တွင်အများဆုံးအသုံးများဟို steroids ကြားတွင်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းပယ်ရာသီကာလအတွင်းမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အကျိုးခံစားခွင့်များကိုအဲဒါကိုကုထုံးအကျိုးကျေးဇူးများကိုဖွင့်ဘို့အစိတျအပိုငျးအတွက်မျက်နှာသာဖြစ်ပါတယ်။ ဟို Steroid တစ်မျိုးအငြင်းပွားဖွယ်ရာနှစ်ပေါင်းများစွာအတူ, အမှန်တကယ် DECA အမှုန့် Durabolin ၏သက်ရောက်သည်နှင့်တူသောအရာတို့ကိုနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်မှုနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်နှင့်အတူမှုန်ဝါးခဲ့ကြ '' roid ဒေါသ။ ' ဤသည်တို့ကြောင့်လိင်ဟော်မုန်း Testosterone နဲ့ကအဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်န်းကျင်ရှိကွောငျးအမျိုးမျိုးသောသတင်းမှားရန်၎င်း၏ဆက်သွယ်မှုမှတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
Nandrolone (DECA ကုန်ကြမ်းအမှုန့် Durabolin တက်သော Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်း) ပထမဦးဆုံးစီးပွားဖြစ်အသုံးပြုခြင်းများအတွက်ရည်ရွယ်အတူ 1960 ရဲ့ထင်ရှား။ , ကုန်သွယ်ရေးနာမကိုအမှီ DECA ကုန်ကြမ်းအမှုန့် Durabolin အောက်၌ဖုံးထားကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှမြောက်မြားစွာဗားရှင်းနဲ့အမည်ပြေင်းကာလမှတဆင့်သွားပြီ။ ဒီနေသော်လည်း DECA အမှုန့် Durabolin ထွက်ရှိမူးယစ်ဆေးများအတွက်အများဆုံးမှတ်မိနာမကိုအမှီနေဆဲဖြစ်သည်။ ကြောင့်ကြောင့်အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်အကြောင်းကိုစိုးရိမ်မှုတွေရန်, အမေရိကန်မူးယစ်ဆေးဖို့ကန့်သတ် access ကိုရှိပါတယ်။ ကြောင်းနေသော်လည်း DECA အမှုန့် Durabolin ယနေ့တိုင်အောင်အထဲတွင်ကူညီနိုင်တဲ့အရာ၏အကွာအဝေးအဘို့ချစ်ရာသခင်သည်တစ်ဦးလူကြိုက်များကုထုံးကုသမှုနေဆဲဖြစ်သည်။
ကုန်ကြမ်း Nandrolone Decanoate အမှုန့်အပေါ်သတိပေး
အမျိုးသမီးများနေ့ထိုကဲ့သို့သောအသံပိုမိုနက်ရှိုင်း, ဝက်ခြံ, ရာသီမမှန်အဖြစ် virilization လက္ခဏာပေါ်လာသငျ့သညျ။ နောက်ကြောင်းပြန်မလှည် virilization ကာကွယ်တားဆီးဖို့ပျော့ virilism ၏သက်သေအထောက်အထားများ၏ထိုအချိန်တွင်မူးယစ်ဆေးကုထုံး၏ပြတ်တောက်လိုအပ်ပေသည်။
DECA အမှုန့် Durabolin အသုံးပြုမှုအလွန်လေ့တစ် Steroid တစ်မျိုးသံသရာပြီးနောက်သဘာဝက testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှု၏ပြန်လည်နာလန်ထူနှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်များ၏ဆိုးရွားသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိပါတယ်။ လိင်စိတ်နှင့် / သို့မဟုတ် erectile function ကိုအပေါ်ဆိုးရွားသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်းဘုံဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သောက်သုံးသောကအနည်းဆုံး 200-400 မီလီဂရမ် / ရက်သတ္တပတ်သို့မဟုတ်အခါမူးယစ်ဆေးမဆိုထိရောက်သောထိုးမှာတစ်ဦးတည်းကိုအသုံးပြုသည်တစ်ခုဖြစ်သည်ပုံမှန်အားသာသည့်အခါ။ DECA ကုန်ကြမ်းအမှုန့် testosterone ဟော်မုန်းသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သော trenbolone, Masteron, ဒါမှမဟုတ် Dianabol အဖြစ်ပိုပြီးအန်ဒရိုဂျင်ဒြပ်ပေါင်းများသိသိသာသာဆေးများနှင့်အတူပေါင်းစပ်မဟုတ်အခါပြဿနာများပိုဆိုးဖြစ်ကြသည်။ ကျယ်ပြန့်တစ်ဦးချင်းစီအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲလိင်စိတ်နှင့် erectile function ကိုအပေါ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့် ပတ်သက်. တုံ့ပြန်ရှိပါသည်။ ခံစားချက်၏စီးပွားပျက်ကပ်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။
ကုန်ကြမ်း Nandrolone Decanoate အမှုန့်နောက်ထပ်ညွှန်ကြားချက်
Nandrolone Nandrolone Decanoate (DECA) အမှုန့်ဆေးထိုးမှသာပိုကောင်း gluteal ကြွက်သားထဲသို့နက်ရှိုင်းသောအသားထိုးဆေးအသုံးပြုသည်။ အသုံးပြုမှုအန္တရာယ်များ၏ကုထုံးတုံ့ပြန်မှုများနှင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားအပေါ်အခြေခံပြီးရပါမည်။ Nandrolone Decanoate အမှုန့် / DECA အမှုန့်တွဲဖက်ကုထုံးနှင့်လုံလောက်သောအဖြစ်မှတ်ယူသင့်နှင့်ဖြစ်နိုင်လျှင်, ကုထုံးပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဖြစ်သင့်သည်။
DECA အမှုန့် Durabolin (nandrolone) ၏တစ်ဦးအပိုဆောင်းအားသာချက်ကဒီဒြပ်ပေါင်းများဟာဦးရေပြားနှင့်အရေပြားပေါ်မှာဆိုးရွားသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုး၏စည်းကမ်းချက်များ၌အတော်လေးပျော့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ 5-alpha-reductase အင်ဇိုင်းမတူဘဲတခြားဟိုစတီရွိုက်ဒီအင်ဇိုင်းများကထိခိုက်နေကြသည်စဉ် nandrolone များ၏အာနိသင်လျှော့ချရန်ပြုမူနှင့် testosterone ဟော်မုန်းရဲ့အာနိသင်အမှန်တကယ်ကတိုးပွါးထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်ကြမ်း DECA အမှုန့်မှုန့်
သငျ့လျြောသော testosterone ဟော်မုန်းထက်အနည်းငယ် သာ. ကြီးမြတ်, DECA အမှုန့် Durabolin ကုန်ကြမ်းအမှုန့်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားအစွမ်းထက်ဟိုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်။ ဒီနေသော်လည်း DECA ကုန်ကြမ်းအမှုန့် Durabolin ၏ခြုံငုံအန်ဒရိုဂျင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သာ 37 (testosterone ဟော်မုန်း 100 ဖြစ်ပါသည်။ ) ဖြစ်ပါတယ် DHN သို့မဟုတ် dihydronandrolone မှလျှော့ချ, DECA ကုန်ကြမ်းအမှုန့် Durabolin အများကြီးနှေးကွေးအဲဒီမှာအထဲကဟို steroids သည်းခံဖို့တုံ့ပြန်များနှင့်အပြန်အလှန်အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသူ့ရဲ့အလွန်နိမ့်အီစထိုဂျင်လုပ်ဆောင်မှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွက်၎င်း၏အောင်မြင်မှုကြွေးတင်နေသည်။ DECA အမှုန့် Durabolin သွေးထဲတွင် aromatize နိုင်ပါတယ်နေစဉ်, က testosterone ဟော်မုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်ဦးဖြတ်ပြီးဖလားကိုရယူခဲ့တာပါ 20% မှာဒါပါဘူး။ ဒီရှိနေသော်လည်း, သင်ဆဲယင်း၏ progestin သဘောသဘာဝသတိထားရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်စေခြင်းငှါသတိပြုပါ။
ကုန်ကြမ်း DECA အမှုန့်စျေးကွက်
Nandrolone Decanoate အမှုန့်ကိုဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို; AASraw ထံမှ DECA အမှုန့်ကိုဝယ်
AASraw injuection အသုံးပြုမှုများအတွက်ကာယဗလသို့မဟုတ်မြေအောက်ဓာတ်ခွဲခန်းများမှသန့်ရှင်းစင်ကြယ် 99% Nandrolone Decanoate / DECA ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ဖြစ်သည်။ ။
10g DECA အမှုန့်ရော် Powder
12g DECA အမှုန့်ရော် Powder